KAFAN!! MISE KABO?? (Faallo)
Mahad Ilaah baa leh, Nabadgelyo iyo Naxariisna nabigeenna korkiisa ha ahaato.
Kafan iyo Kabo waa labo shay oo midna nolosha lagu xidho, midna geerida kadib la isu xidho. Waa laba shay oo aan isku qaldami karin. Mid qof nool baa qaata midna qof dhintay baa lagu duuduubaa. Shirkii dalka Kenya uga socday Soomaalida labada sano iyo Dawladda Kumeelgaarka ah ee ka dhalatay shirkaas, ee iyana lix bilood jirsatay waxaa lagu muransanyahay natiijada kasoo baxday iyo cawaaqibta laga dhaxli doonaa maxay noqon? Kafan mise kabo!!
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “wax nin la qumman baa nin la qalloocan”, iyo “nin walba qummanihiisaa qoorta ugu jira” waana arrinta iyo caqliga dhaxalsiiyey Soomaalida maanta in noloshii iyo geeridii isaga qaldanto, in saxii iyo qaladkii isaga dhexyaacaan iyo in dantii iyo dandarradii la kala garan waayo. Waxaa habboon in qofku waxa la qumman iyo waxa la qalloocan labadaba cilmi, caqli iyo dan ku saleeyo si falkiisu uusan halaag iyo qoomammo ugu horseedin. Waxaad arkaysaa dadkii Soomaaliyeed oo maalin kasta hadba meel loo duwayo, hadba meel loo didsanayo, hadba gidaar madaxa loo saarayo, oo hadba meel lagu askaaxayo (laynayo) sidii ido ama riyo goosan ah.
Si aan u qiimeyno in shirkii Kenya iyo dawladdii ka dhalatay ay yihiin kafan ama kabo, bal aan raadraac ku sameyno ama isweydiinno su’aalo u baahan jawaabo aan looga maarmin gunaanadka faalladaan.
Maxay ahayd ujeeddooyinkii shirka loo qabtay?
Run ahaantii ujeeddooyinkii shirka loo qabtay way faro badan yihiin, waxaase loo qaybin karaa ilaa afar ujeeddo oo waaweyn.
Ujeeddadii ay ka lahayd dawladdii Carte lagu soo dhisay ee C/qaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ahaa waxay ahayd in iyada iyo mucaradka ama golaha SRRC lagu dhexdhexaadiyo, oo wixii dhimman lasii dhameystiro.
Ujeedadii golaha SRRC waxay ahayd in ay ka takhallusaan Dawladda Carte lagu soo dhisay oo wax walba koow laga soo bilaabo.
Ujeedada dalwadaha deriska waxaa ugu xoog roon tan dalwadda Ethiopia oo ahayd in dawladda Carte ay ka takhallusto golaha SRRCna soo saarto. Jibouti iyo Kenya waxay rajo ka qabeen in shirkii Carte la sii dhammeystiro, mase noqon.
Dawladaha Yurub iyo Maraykanka oo kala ujeeddo duwanaa, waxay guud ahaan iska waafaqsanaayeen in la helo dawlad ay ka raalli yihiin oo Soomaaliya lagala xaajoodo si aysan bahallo galeen u noqon aragtidooda.
2. Ujeeddooyinkaas maxaa ka hirgalay?
SRRC, Ethiopia iyo Reer Yurub oo Maraykanka lagu daray waxaad mooddaa in ujeeddooyinkoodii wax badan uga hirgaleen
Dawladdii Carte lagu soo dhisay iyo Shirkii Jibouti martigelisay waa laga takhallusay. Dawladda Kenyana waxay hadba la bah tahay meeshii ay danteedu ku jirto waxayse aad ugu ujeeddo dhawdahay dawladaha reer Yurub oo ay wakiil uga tahay shirka.
3. Yaa shirka Soomaalida uga qayb galay?
Shirka waxaa soomaalida uga qayb galay:
Calool ku dhiigle iyo
Caqli ku dhiigle
4. Maxaa shirkii 2da sano loo fadhiyey kasoo baxay?
Waxaa layaab ku noqotay indheergaradka Soomaaliyeed qaabkii shirka lagu waday. Sidii ergooyinkii Soomaalida loola dhaqmay iyo sida looga dhowray in cid aan afkaarteeda laga raalli ahayn shirka ka qayb qaadato. Waxaad moodday ama uu ahaa shirku mid Soomaalida loo qabtay, laakiin aan Soomaalidu shaqo ku lahayn habka loo abaabulay, habka uu u socday iyo natiijooyinka kasoo baxay intaba.
Waxaa shirkii kasoo baxay Dastuur aan ilaa hadda la garaneyn cidda qortay iyo meesha lagu qoray toona!! Waa dastuur iska soo daba iyo horjeeda oo bilowgiisa iyo dhammaadkiisu isburinayaan. Waa dastuur aad mooddo in cid aan Soomaali ahayn loo qoray amaba qortay.
Waxaa shirkii kasoo baxay Baarlamaan ay mudanayaal ka yihiin intii shirka ka qayb gashay! Hoggaamiye kasta oo ka mid ah Gacan-ku-dhiiglayaashii, Af-ku-dhiiglayaashii iyo Calool-ku-dhiiglayaashii shirka ka qayb galay wuxuu ku dadaalay in uu baarlamaanka kusoo darsado mid isaga ka sii liita ama la mid ah xagga aragtida iyo aqoontaba si uu isaga ugu codeeyo maalinta doorashada.
Waxaa shirkii ka soo baxay Dawlad Kumeel Gaar ah oo Fadaraal ah oo ay madax iyo minjaba ka yihiin saddexdii qolo ee shirka ka qayb gashay. Gacan-ku-dhiigle wuxuu dilo uun buu yaqaan, inuu wax dilo buuna diyaar u yahay. Calool-ku-dhiigle inuu wax bililiqeysto uun buu yaqaan taas buuna meesha ugu jiraa. Caqli-ku-dhiiglana wuxuu aaminsanyahay madaxa oo lagu socdo in ay ka wacan tahay in lugaha iyo cagaha lagu socdo
Intaa waxaa dheer oo in badan oo indheergaradka Soomaaliyeed ka mid ah ay aaminsanyihiin in natiijooyinka shirka kasoo baxay ama imaan kara ay ka mid yihiin dagaallo lagu hafto oo dalka kasoo cusboonaada. Gacan shisheeye oo dalka la wareegta. Baaba’ iyo dabar go’ ku yimaada ummaddii awalba dhibaataysnayd ee muddada dheer silica iyo saxariirta la baday. Waxaa jira aqooyahan kale oo aaminsan in waxa meesha lagu dhigayba ay tahay riwaayad ama “show” oo aysan jirin laba Cali oo lagu heshiisiiyey shirkaas balse dad col ahaa wax la isugu daray si ay si fiican isugu aakhiro-seegaan. Waxaa dadka qaar qabaa in markii la arkay dadka Soomaaliyeed oo dagaalkii ka daalay, wax soo saar, isdhexgal iyo nabad ku wada noolaanshana bilaabantay, ay lagama maar maan ku noqotay ummado iyo dawlado burburka qarankaan gaaray qayb ka ahaa in ay mar kale dab cusub huriyaan oo wixii awalba la isku seegay soo dhexdhigaan wax-ma-garatada Soomaaliyeed.
Waxaa iyana jira aragti ay qabaan in badan oo Soomaalida ka mid ah gaar ahaan danyarta, daacadda kuwa dulman iyo kuwa hantidooda ma-hanbeeye aan meel dheer la tagin la wareegay. Dadkaas waxay aaminsanyihiin in “wax xoog lagu qaaday xoog uun lagu soo dhacsado” oo aan walaalow waxaygii isii aysan suurtogal ahayn. Waxay leeyihiin “Mukulaal Madoow haddii aan muruq lagu muquunin Minankeenna ka biximayso”. Qoladaan waxay la tahay ama ku niyadsanyihiin in ciidamada shisheeye ay u dhaamaan ma-naxe iyo ma-noogaha ku mabay ma-guurtadii gaarka loo lahaa iyo tii guudba!!. Waxay leeyihiin “waxba dhowrsanmaynee Alloow dhuxolo soo daadi”.
Aragti kale oo saddexaad waxay leedahay marka la eego sida shirka loo maamulay, sida wax uga soo baxeen iyo sida dad aan heshiis ahayn 30 bilood meel loogu wada horjoogay, waxaa jira qorshe qarsoon oo gacan qarsoon gadaal ka hagayso. Waxay indheergaradka fikraddan qabaa aaminsanyihiin in hoggaanka sare ee Dawladda Fadaraalka ee Kumeelgaarka iyo Golaha Shacabka ee Kumeelgaarka uusan midkoodna go’aan xor ah lahayn, uusan waxna dhisi karin waxna burburin karin! Waxay dadka fikraddaan qaba aaminsanyihiin in ujeeddooyinkii shirka loo qabtay qarashdkii iyo waqtigii uga baxay gacanta gadaal ka maamulaysa aysan marna suurtagal ahayn in Maryoolay la yiraahdo ka taliya oo ku kala taga!! Waana culeyska keenay in min South Africa, Nigeria, Tunisia, Libya, Yemen, Sudan, Uganda iyo Ma-quuste Zanawi ay ciidamo ku yaboohaan! Soomaalidu waxay tiraahdaa “Caano ima siin jirine ma qorrataa uga dhacday”!! Carab iyo African maxay maanta 15 sano kadib ku keeneen in ay yiraahdaan waa in Somaaliya Dawlad loo dhisaa!! Oo ciidan loo diraa?
Isugeyn marka la eego oo aad loogu fiirsado sida wax ku bilowdeen, wax loo maareeyey, sida wax uga soo baxeen iyo halka xaal marayo waxaa maxsuulku ama dhaxalka Dawladda Fadaraalka Kumeelgaarka ee shirkii Kenya ka dhalatay noqon doonaa “Kafan ama Kabo”. Marka laga dabqaato labada aragtiyood ee hore waxaa kuu soo baxaya in Dawladdaan noqon doonto kafan lagu duubo qarankii Soomaaliyeed ee dhowr iyo tobon sano ka hor geeriyooday, sidaasna jiritaankii Soomaliyeed ku xijaabto. Haddiise la eego fikradda dhahaysa “Matashadaba loo Tali” ee golaha shacabkee bakooradaha iyo hangoollada isku garaacay ee dhawrka gobol u kala guuraya, ay jirto gacan gadaal ka maamusha wayba jirtaa sida fikraddaan qabto’e, waxaa dhici karta in dawladda Fadaraalka ee Kumeelgaarku ay noqoto “Kabo”. Kabi marna qodoxda iyo qashinkay kaa xigsataa marna qabowga iyo kuleylkay kaa xigsataa. Soomaalidu waxay tiraahdaa “kab-xume ma haree kab-laawaa hara”. Bal aan dhawrno lixda bilood ee soo socota meesha xaal ku danbeeyo – kafan ama kabo midday noqoto.
QORAALADII HORE EE Inj. Cumar.. Guji